Warbixin: Tacaddiyada Haweenka ee ka Dhaca Malcaamadaha, Goobaha Waxbarashada iyo Shaqada - Somaliland Post
Home News Warbixin: Tacaddiyada Haweenka ee ka Dhaca Malcaamadaha, Goobaha Waxbarashada iyo Shaqada
Hargeysa (SLpost)- Somaliland GBV oo ah Koox ka tirsan Ururrada Bulshada Rayidka ah ee Somalialnd isla markaana Isu-xil-Qaamay soo bandhigista Tacaddiyada ka dhanka ah Haweenka, ayaa warbixin ay soo saareen maanta waxa ay ku soo bandhigeen heerka ay marayaan tacaddiyada haweenka/hablaha loogu geysto goobaha Waxbarashada iyo Shaqada.
Xarunta Somalilandgbv ee isu-xilsaartay u dhaq-dhaqaaqista Arrimaha haweenka oo cilmi-baadhis qoto-dheer ku sameeyey arrintan warbixintooda kuma sheegin magacyada shaqsiyaadka baadhitaanka sameeyey oo sheegay inay natiijada baadhistoodu ku salaysan tahay waraysi iyo sheekooyinka haween/hablo dhibbaneyaal ah.
War-murtiyeed ka soo baxay Xarunta Somalilandgbv isla markaana lagu soo lifaaqay warbixinta ay diyaariyeen, ayaa lagu sheegay sidan:-
“Warbixintan oo qayb ka noqonaysa, warbixino taxane ah oo aanu ku eegi doonno tacaddiyada ka dhan ah haweenka iyo hablaha reer Somaliland, ee ka dhaca goobaha shaqada, waxbarashada, malcaamadaha iyo adeeg bixinta, ayaa qaybtani noqon doontaa, mid sawir guud ka bixinaysa, hababka ay u dhacaan tacaddiyadaasi.
Warbixintu kama hadlayso, xidhiidhka gogoleed (Zino) ee dhex mara rag iyo dumar is-ogol, taasi waa dembi, waana mid ciqaabtiisu u taallo Ilaahay SWT inuu addoomadiisa ku ciqaabo, ama haddii ay towbad la yimaadaan uu ka cafiyi karo. Waxaa warbixintu ku kooban tahay, falalka anshax xumada ee aan ku iman laba qof oo si iskood ah dembi u galay, hase ahaatee loo adeegsaday awood xafiiseed, si falkaas anshax xumada ah loo sameeyo, ama tacadiyo ka hooseeya oo hablaha sharaftooda iyo karaamadooda waxyeelaya.”
HALKAN GUJI SI AAD ULA SOO DEGTO WARBIXINTA